Wararka - Jihada horumarka ee xambaaraha mustaqbalka.
Jihada horumarka ee xamuulka mustaqbalka.
Conveyor waa mid ka mid ah aaladaha ugu muhiimsan ee hawlgallada shirkadaha casriga ah, mashiinnada saadka iyo qalabka, waa aasaaska hay'adda macquulka ah ee wax soosaarka tirada badan iyo habka socodka makaanigga ah. Shirkadaha saddexaad ee loojistikada, gudbiyaha ayaa ah walxaha iyo aasaaska farsamo ee abaabulka howlaha saadka, taasoo ka tarjumeysa awooda saadka ee shirkada.
Conveyor waa aasaaska shey ee nidaamka saadka. Markii la soo saaray horumarkii iyo horumarkii loojistikada, qalabka loojistikada waa la hagaajiyay lana sameeyay. Dhanka qalabka loojistikada, qalab badan oo cusub ayaa sii socda oo soo baxaya, taas oo si weyn u yareyneysa xooga shaqaalaha, hagaajinaysa howlgalka saadka iyo tayada adeega, yareyneysa qiimaha saadka, door muhiim ah ka ciyaareysa howlaha saadka, waxayna si weyn u sare u qaadeysaa horumarka degdega ah ee saadka.
Mustaqbalka, xamuulku wuxuu horumarin doonaa dhanka horumarka ballaaran, isagoo ballaarinaya baaxadda isticmaalka, kala soocida qalabka tooska ah, yaraynta isticmaalka tamarta, yareynta wasakheynta iyo dhinacyada kale.
1. Sii wad horumarinta si baaxad weyn. Baaxad weyn waxaa ka mid ah awoodda gudbinta ballaaran, dhererka mashiinka hal weyn iyo xagal gaarsiinta ballaaran. Dhererka qalabka gudbinta haydiga ayaa gaadhay in ka badan 440 km. Dhererka xamuulka qaada hal suun wuxuu ahaa ku dhowaad 15 km, waxaana jiray "waddo xambaarsan suunka" oo ka kooban dhowr nooc oo isku xiraya Xisbiga A iyo Xisbiga B. Wadamo badan ayaa sahaminaya qaab dhismeed dhammaystiran oo kaamil ah masaafo dheer iyo awood ballaaran oo joogto ah gaarsiinta qalabka.
2. Ballaari baaxadda dalabka xamuulka. Horumarinta heerkulka sare, xaaladaha heerkulka oo hooseeya, wax dillaaca, shucaaca, walxaha ololi kara ee deegaanka ka shaqeeya, waxayna qaadi karaan kuleyl, walxaha qarxa, oo si fudud looga agglomerate, iyo walxaha xambaarsan walxaha dhejiska ah.
3. Qaab dhismeedka xamuulku wuxuu buuxin karaa shuruudaha xakamaynta otomaatiga ah ee nidaamka maareynta maaddada hal mashiin. Tusaale ahaan, gawaarida xamuulka ee loo isticmaalo xafiiska boostada si otomaatig ah loogu kala sooco xirmooyinka waa inay awoodaan inay buuxiyaan shuruudaha kala saarida ficilka.
4. Yaraynta isticmaalka tamarta si loo keydiyo tamarta ayaa noqotay arrin muhiim ah oo ka mid ah cilmi baarista caafimaadka ee dhanka tikniyoolajiyadda gaadiidka. Isticmaalka tamarta ee 1km halkii tan oo walxaha ah ayaa loo qaatay inuu yahay mid ka mid ah tusmooyinka muhiimka ah ee xulashada xamuulka.
5. Iska yaree boodhka, buuqa iyo gaaska qiiqa ee ay soo saaraan gaadiidleyda kala duwan inta lagu jiro hawlgalka.
Waqtiga boostada: Mar-03-2021